Soo celiyaa xanta ku saabsan Apple Watch Series 8 oo leh naqshad siman | IPhone News
Apple Watch wuxuu noqday a muhiim ah Isticmaalayaal badan iyo rajada ku xeeran jiilalka cusub waa mid aad u sarreeya. Sannadkii hore, qiiq aad u badan ayaa soo baxay agagaarka naqshadda cusub ee Apple Watch Series 7 uu lahaan doono. Waxaa la saadaaliyay in cidhifyada wareegsan laga tagi doono iyada oo loo door bidaayo naqshad leydi iyo siman ah. Aakhirkii ma jirin nasiib iyo sii socosho. Si kastaba ha ahaatee, Wararka xanta ah ee ku saabsan nakhshad saraaxad leh ayaa mar kale ku dhawaaqaysa agagaarka Apple Watch Series 8 waxayna u badan tahay in sannad ka dib, Apple ay samayn doonto boodboodka si wanaagsan.
Naqshadaynta fidsan waxay ku soo noqnoqonaysaa Apple Watch Series 8
Ma riyoonaysid laakiin waxay u egtahay a horaa loo arkay Xeerarka oo dhan. Waxaan dib u soo nooleyneynaa wax la mid ah kii dhacay sannadkii hore laakiin waddo dheer ayaa noo taal. Waxaas oo dhami waxay ku bilaabeen macluumaad ka leaker si fiican loo yaqaan Jon Prosser oo ku saabsan naqshadeynta cusub ee suurtogalka ah ee Taxanaha Apple Watch 7. Dhab ahaantii, wuxuu helay qorshooyinka CAD ee naqshadaynta moodada iyo horumarinta fikrado taxane ah, oo leh olole warbaahineed oo weyn, in Kaas oo nakhshad leydi-xagal ah oo cusub oo fidsan kana tagaysa qalooca dhammaan jiilalka Apple Watch ilaa maanta. Si kastaba ha ahaatee, naqshadda ugu dambeysa ee Taxanaha 7 uma eka fikradaha mana baabi'in cidhifyada wareegsan.
Hadda waa markeedii Apple Watch Taxanaha 8 taasoo ifka arki doonta bilaha soo socda. Wararka xanta ah ayaa tilmaamaya saddex waxyaalood oo cusub oo ku jira bandhiggan. Dhinaca kale, Apple Watch Series 8. Dhanka kale, jiilka labaad ee SE. Iyo, ugu dambeyntii, daabacaad cusub oo la yiraahdo daabacaadda sahamisa, oo leh qalab aad u adag oo loogu talagalay khatarta ciyaaraha iyo xaaladaha daran.
Wararka xanta ah ee Apple Watch Series 8 hagaajinta ogaanshaha hurdada ayaa kor u kacay
Laga maqlay ilo maanta in uu jiro muraayad hore oo fidsan oo loogu talagalay bandhigga saacadda tufaaxa. Fursad sare oo ah in tani ay tahay muraayadda hore ee Apple Watch Series 8.
Maan maqal wax ku saabsan sida dib u habaynta guryuhu yahay iyo nooca weli.
sawirka sawirka kaliya maaha mid dhab ah. https://t.co/uC6i22Q0aZ pic.twitter.com/DmWh8FOZGE
- ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) Waxaa laga yaabaa 16, 2022
Isticmaalaha ShrimpApplePro caan ku ah Twitter-ka daadadihiisa iPhone 14 Pro, iyo kuwo kale, ayaa xaqiijiyay taas guddiga Apple Watch Series 8 wuxuu noqonayaa afar xagal. Waxa kale oo uu xaqiijinayaa in aanu haynin macluumaadka ku saabsan nakhshad inteeda kale ama sanduuqa sidaas oo kale, sidaas darteed wax kale ma naqaano. Laakiin waxa la hubo ayaa ah in kiristaan ​​leydi ah lagu daro sanduuq leydi ah. Tani waxay soo noolayn kartaa fikradda Apple Watch oo guri oo afar gees ah kaas oo bilaabmay, sida aynu sheegnay, Jon Prosser sanad ka hor.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Wararka xanta ah ee ku saabsan Apple Watch Series 8 oo leh soo laabasho nakhshad siman